on: १८ मंसिर २०७५, मंगलवार ०६:३२ सम्पादकीय
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा नेपालमा पनि बढ्ने र घट्दा यहाँ पनि घट्ने गरी लागू गरिएको स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य केही हप्ताअघि नै घटाउनुपर्नेमा बल्ल सोमवार केहि घटाएको छ । भारतमा मूल्य घटाउँदा पनि निगमले मूल्य घटाएको थिएन । तर, महँगोमा तेल बेच्दा पनि निगम घाटामै छ । यो अहिलेको मात्र होइन, विगत केही दशकदेखिको रोग हो । यस रोगलाई कुनै पनि सरकारले निको पार्न सकेका छैनन् । साँच्चीकै निगम कहिल्यै नसुध्रने हो त ?
निगमको तेलको मूल्य निर्धारण गर्दा ढुवानी, प्राविधिक क्षति आदि सबै कटौती गरेर केही मार्जिन राखिन्छ । तैपनि घाटा हुनुको अर्थ निगमभित्र व्याप्त अनियमिता नै कारण हो भन्ने देखिन्छ ।
अहिले आयल निगमलाई डिजेल र ग्यासबाहेक अन्य पेट्रोलियम पदार्थमा फाइदा छ । यो निगमले नै दिएको तथ्याड्ढ हो । तर पनि निगम दैनिक २ करोडभन्दा बढी घाटामा छ । सस्तोमा किनेर महँगोमा बेच्दा कसरी निगमलाई घाटा हुन्छ भन्ने कुरामा न सरकारले कहिल्यै चासो दिएको छ न त निगमले नै । निगमको काम नै सस्तो मूल्यमा सहज आपूर्ति गर्नु हो । तर, निगमले न त सस्तोमा तेल आपूर्ति गर्न सकेको छ न त मागअनुसार आपूर्ति व्यवस्थापन नै । तेलको आपूर्तिमा समस्या देखाएर बजारमा हाहाकार देखाउनु र अनेक कमिशनको खेलमा लाग्नु नै निगमको दैनिकीजस्तो देखिन्छ । त्यसैले ट्याड्ढरबाट प्रशस्त तेल हराउँछ, पेट्रोल पम्पको मनपरीमा निगम मौन बस्छ । खरीदविक्रीका अनेक तानाबानामा कमिशनको चक्करमा निगम प्रशासन रमाउँछ । सुधारका प्रतिवेदन दराजमा धूलो खाएर बसिरहेका छन्, कार्यान्वयनको चासो पटक्कै छैन । यस्तो चरम बेथिति रहेको निगमले सर्वसाधारण जनतालाई ‘ठगिरहेको’ छ तर सरकार रमिते मात्रै बनेको छ । किन निगमको बेथिति रोकिँदैन ?
निगमबाट तेल किनेर बेच्ने पम्पहरू कहिल्यै घाटामा छैनन् भने भारतसँग प्रशोधित तेल किनेर बेच्दा निगम घाटामा कसरी गयो भन्नेमा सरकारले सोधखोज गर्नुपर्ने हो । निगमको तेलको मूल्य निर्धारण गर्दा ढुवानी, प्राविधिक क्षति आदि सबै कटौती गरेर केही मार्जिन राखिन्छ । तैपनि घाटा हुनुको अर्थ निगमभित्र व्याप्त अनियमिता नै कारण हो भन्ने देखिन्छ ।
निगमलाई सुधार गरेर यसलाई नाफामूलक बनाउने विषयमा धेरै आयोग बने तर ती सबै मौसमी बाजामात्रै बने । निगमलाई आईओसीले तेल रोक्का गरेपछि सुधारको कुरा हुन्छ । तर, आपूर्ति नियमित हुन थालेपछि ब्रह्मलुट शुरू हुन्छ । निजीक्षेत्रलाई तेल आपूर्तिको जिम्मा दिने भनेर नीतिगत निर्णय गरे पनि तेललाई रणनीतिक वस्तु भनी सरकारी मातहत नै राख्ने गरिएको छ । निजीक्षेत्रलाई तेल आयात गर्न दिनेबित्तिकै निगमको एकाधिकार तोडिन्छ र मनपरी गर्न पाइँदैन भन्ने सरकारी सोचको परिणति निजीक्षेत्रले तेल आयात गर्न नपाएको हो ।
देशको व्यापारघाटाको मूल कारण तेल आयात नै हो । ठूलो परिमाणमा आयात हुने भएकाले सानो अड्ढको चलखेल गर्दा पनि अर्बौं रुपैयाँ फरक पर्छ । त्यही भएर निगमको कार्यकारी प्रमुख विवादमा पर्ने गरेका छन् । यसको समाधान भनेको निजीक्षेत्रलाई आयात गर्न दिनु हो भने विस्तारै जलविद्युत्को उत्पादन गरी तेल आयातलाई विस्तारै विस्थापित गर्दै जानु नै हो । तर, तत्कालका लागि पेट्रोलियममा इथानोल मिसाउनेलगायत काम गर्न सकिन्छ । यसका लागि निगम व्यवस्थापन र कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नैपर्छ ।